नारायणगढ बजारको स्वरूप फेरिँदै, अब अव्यवस्थित होडिङ्ग तिर पनि नजर जान्छ की ? – Saurahaonline.com
नारायणगढ बजारको स्वरूप फेरिँदै, अब अव्यवस्थित होडिङ्ग तिर पनि नजर जान्छ की ?
चितवन, २९ असार । भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहाल भन्छिन् ‘जनप्रतिनिधि आएपछि सहरलाई सफा, सुन्दर र सुरक्षित बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ’ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि नारायणगढ बजारको स्वरूफ फेरिँदै गएको छ ।
एक वर्षअघिसम्म मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारीको चाप, फुटपाथको व्यापार, साना सवारीको भिडले नारायणगढ बजार अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो ।
मोटरसाइकल र साना गाडी पार्किङस्थल नभएकाले मानिसहरू नारायणगढ बजार पस्नै चाहँदैनथे । तर, अहिले बजार क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या क्रमशः हट्दै गएपछि नारायणगढ बजारले फरक पहिचान बनाएको छ । बजार क्षेत्र घुम्न, डुल्न, किनमेल गर्न लायकको बनेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगत एक वर्षको अवधिमा गरेको देखिने काम भनेकै फुटपाथ हटाउने र तीनपांग्रे सवारीलाई मुख्य राजमार्गमा गुड्न रोक लगाउने हो ।
अहिले महानगरले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले जनप्रतिनिधि आएपछि सहरलाई सफा, सुन्दर र सुरक्षित बनाउने अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिइन् । पार्किङसँगै ढल व्यवस्थित गर्ने, सडक फराकिलो पार्ने, रातको समयमा सबै ठाउँमा सडक बत्ती राख्ने र रूख–बिरुवा लगाएर हरियाली बनाउने दाहालको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले राजमार्ग, बाइपास रोड र नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा इरिक्सा, अटो र ट्याम्पोलाई रोक लगाएको दुई सातामै भरतपुर र नारायणगढ बजार क्षेत्र धेरै खुला देखिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नारायणगढ बजार सडकछेउका पैदलमार्ग, अस्तव्यस्त पार्किङ, तीनपांग्रे सवारी र पसलअगाडि राखिने सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले सडक छेउमा पार्किङ निषेध गरेर बजारका तीन ठाउँमा सवारी पार्किङस्थल निर्माण गरेको महानगर प्रमुख दाहालले बताइन् । पछिल्लो समय महानगरले ट्रक पार्किङको पनि व्यवस्था गरेको छ । ट्राफिकले सवारी आवागनमलाई सहज बनाउन र ट्राफिक प्रहरीको पनि सहजताका लागि अहिले विभिन्न स्थानमा महानगरको सहकार्यमा आकर्षक ट्राफिक पोस्ट निर्माण गरिएको छ ।
बजार क्षेत्रमा अटो रिक्सा र ट्याम्पो हटाएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै सहजता आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख वेदप्रसाद गौतमले बताए । महानगरपालिकाले नारायणगढ बजारमा अहिले पार्किङ गरिएका मोटरसाइकललाई छुट्टै पार्किङको व्यवस्थाको तयारी गर्दै छ । त्यसबाट सहर थप व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ ।
महानगरले १५ जेठदेखि भरतपुर र नारायणगढ बजार क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार गर्न रोक लगाएपछि भरतपुर र नारायणगढ बजार क्षेत्रको मुहार फेरिएको हो । भरतपुर र नारायणगढ बजार क्षेत्रमा पाँच सय मिटर दायाँबायाँ ठेला तथा फुटपाथ पसल राख्न पाइँदैन । यसले सार्वसाधारणलाई सडकपेटीमा हिँड्न निकै सहज भएको छ ।
बालकुमारी कन्या माविको आडमा रहेको ६ कठ्ठा जग्गामा सटर निर्माण गरी १७० फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । जुन काम जनप्रतिनिधि आउनुअघि सम्भव भएको थिएन । महानगरले बैंक, वित्तीय संस्था, ठूला कम्प्लेक्सलाई पत्राचार गरेर आ–आफ्नो पार्किङको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । वडामा व्यवस्थित हाटबजार निर्माण भइरहेका छन् ।
अव्यवस्थित होडिङ्ग हटाउने की ?
यतिवेला बजार सन्दुर हुदै गएपछि फेरि मेयर रेनु दाहाललाई अर्को चुनौती थपिएको छ ।
राजश्वको मात्र मुख हेर्न हाईन् अब, अव्यवस्थित होडिङ्ग हटाउने तर्फ पनि ध्यान मेयरको जान जरुरी स्थानिय विश्वास श्रेष्ठले भने, ट्राफिक आईल्याण्ड बनिसकेको अवस्था, व्यवस्थित विज्ञापन गर्ने यात्रु स्थलमा भन्दा ठुला ठला होडिङ्ग बोर्ड कहिले हट्छ उनको प्रश्न थियो ।